छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. कर्ण भन्छन् : सेतो दुबी रोग होइन, यसरी हटाउन सकिन्छ « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं– हेर्दा आकर्षक र सुन्दर देखिने चाहना सबैलाई हुन्छ । तर छालामा देखिने विभिन्न समस्याहरुले मानिसको सुन्दरतालाई विगार्छ । छालामा देखिने विभिन्न रोगहरुमध्ये सेतो दुबी पनि एक हो ।
नेपालको जनसंख्याको करीब १० प्रतिशत मानिसमा सेतो दुबीको समस्या रहेको छ । धुलीखेल अस्पतालका छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णका अनुसार सेतो दबी फैलीने र नफैलीने गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । फैलने सेतो दुबी शरीरको कुनै भागबाट शुरु भई विस्तारै शरीरभरी नै फैलन्छ भने, नफैलीने सेतो दुबी शरीरको कुनै भागमा मात्रै हुने गर्छ ।
किन आउँछ सेतो दुबी ?
शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएमा शरीरमा सेतो दाग आउने गर्छ । कसैमा वंशाणुगत गुणका कारण सेतो दुबी आउने गर्छ भने बढी डर, तनावमा रहने मानिसमा सेतो दुबी आउने डा. कर्णको भनाइ छ । तर सेतो दुबी कुनै रोग भने होइन । मानिसहरुमा सुन्दरतामा कमी महसुस गरी सतोदुबीको उपचार गर्ने गर्छन् ।
‘सेतो दुबीले शरीरमा कुनै असर गर्दैन, यसको उपचार गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन’ डा. कर्ण भन्छन्, ‘तर शरीरमा आउने दागकै कारण हिनताबोध महसुस हुन्छ र आत्मश्विासमा कमी आउँछ भने दाग हटाउन समयमा नै उपचार गर्नुपर्छ ।’
डा. कर्णका अनुसार सेतो दुबीको उपचार तीन किसिमले गरिन्छ । औषधि सेवन, फोटो थेरापी र अप्रेसनबाट सेतो दुवीको उपचार हुने गरेको डा. कर्णले जानकारी दिए ।
सेतो दुबी हटाउन खाने र दागमा लगाउने औषधि हुन्छ । सेता दागलाई निको पार्न दाग नमेटिएसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्छ । शरीरमा भएको सेतो दुबी हटाउन चिकित्सकले सिफरिस गरेको औषधि सेवन गरी, औषधि खाएको दुईघण्टापछि घाममा बस्नुपर्ने हुन्छ । औषधि सेवनले दुई महिना देखि चार महिनासम्ममा दाग हराउन थाल्ने र विस्तारै निको हुँदै जान्छ । सेतो दुबीको उपचार जति छिटो ग¥यो उति छिटो निको हुन्छ, जति कम उमेर भयो त्यति छिटो निको हुने गर्छ ।’
फोटो थेरापी भनेको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट प्रकाशको किरणद्धारा उपचार गर्ने विधि हो । फोटो थेरापीमा कृत्रिम सुर्यको किरण वैज्ञानिक तरिकाबाट उत्पन्न गराइ सेतो दाग भएकाहरुको शरीरमा प्रयोग गरिन्छ ।
फोटो थेरापीले छालाको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई नियन्त्रण गरी शरीरको दाग मेटाउन सहयोग पुर्या‍उछ । फोटो थेरापी गराउँदा शुरुमा हप्तामा ३ पटक देखि क्रमश दुई पटक गरिन्छ । दाग हराउँदै गएपछि हप्तामा एक पटक मात्रै प्रयोग गरिने र निकोे भएपछि गर्नु पर्दैन ।
सेतो दुबीको उपचार औषधि सेवनबाट नभएमा फोटो थेरापीको माध्यमबाट उपचार गरिन्छ ।
औषधि सेवन र फोटो थेरापीबाट सेतो दुबी निको नभए शल्यक्रिया गरेर पनि सेतो दुबीको उपचार गरिन्छ ।
१९ वर्षमै प्रोड्यूसरबाट बलात्कृत र गर्भवती भएको गायिका लेडी गागाको खुलासा।
मेरो भर्खरै जन्मेको छोराको कसम खाएर भन्छु पल जेल जाँदा मेरो आँसु झरेको छ, श्रीमती रोएकि छिन (भिडियो सहित)